कानबाटै चुरोट पिउन र बेलुनमा हावा भर्न सक्छन् यी युवा (भिडियो)
एजेन्सी । मानिस कानले के–के गर्न सक्छन् ? कसैले यसका बारेमा सोचेका छन् ? यसका बारेमा सोच्नुपर्ने नै के छ र, कानको सुन्नेबाहेक अरू के काम हुन सक्छ र ? तपाईं यस्तो सोच्नुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । हामी यहाँ यस्ता व्यक्तिका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, जो कानले सुन्नेबाहेक अन्य थुप्रै काम गर्न सक्छन् ।
४१ वर्षीय झेङ जियाङ आफ्नो कानले चिनियाँ परम्परागत बाँसुरी बजाउन माहिर छन् । यति मात्रै होइन, जियाङ कानले चुरोट पिउन र बलेको मैनबत्ती पनि निभाउन सक्छन् । मानिसलाई यो कुरा पत्याउन मुस्किल पर्ला, तर उनी कानबाटै पानी पनि पिउन सक्छन् । जियाङ कानबाटै ट्युबमा हावा भर्न पनि सक्छन् ।
जियाङ कानले चुरोट पिउन, बलेको मैनबत्ती निभाउन र ट्युबमा हावा भर्न सक्छन्
झेङ चीनको फुजियाङ प्रान्तको एक कागज उद्योगमा काम गर्छन् । जियाङ भन्छन्, ‘मैले पाँच वर्षको उमेरमा नै आफ्नो असाधारण प्रतिभाका बारेमा थाहा पाएको थिएँ ।’ जियाङ आफ्नो कानबाट जे गर्न सक्छन्, त्यो धेरैको बसको कुरा होइन ।